Xog: Wasiirka Maaliyadda oo isaga baxay Shirka Golaha Wasiiradda iyo Wasiiro kale oo la filayo inay is casilaan. – Hornafrik Media Network
Xog: Wasiirka Maaliyadda oo isaga baxay Shirka Golaha Wasiiradda iyo Wasiiro kale oo la filayo inay is casilaan.
By HornAfrik	 On Nov 16, 2017
Shirka Golaha Wasiiradda ee Khamiis laha ahaa ayaa lagu soo waramayaa inuu hareeyay Maanta Buuq iyo is qabqabsi, iyadoona wasiiradda Qaar ay Shirka isaga baxeen.
Wasiirka Maaliyadda, C/raxmaan Bayle ayaa la xaqiijiyay inuu ka carooday Shirka Golaha Wasiiradda, walibana ka baxay isagoo aad u caytamaya, Waxaa sidoo kale jira Wasiiro iyagoo Muqdisho ku sugan aanba tagin Shirkii Golaha Wasiiradda Maanta, taasoo ah isbadal cusub oo ay la yimaadeen Wasiiro markii hore aan ka hor imaan jirin Khayre sax iyo qalad.
Wasiirad Maryan Qaasim ayaa shalay isku casishay faragalin uu shaqadeeda ku sameeyay Raiisul Wasaare Khayre, horay Wasiirkii Gaashaandhiga ayaa isna faragalintaas oo kale isku casilay, Waxaa haddana qarka u saaran inay is casilaan Wasiiro kale.
Wasiirka Arrimaha Gudaha, C/faarax Juxaa iyo Wasiirka Maaliyadda, C/raxmaan Bayle ayaa la hadal hayaa in laga yaabo inay Waqtiyadda nagu soo aadan ka mid noqdaan Wasiiradda is casilaya, Waxaa sidoo kale soo baxaya Warar sheegaya in Xubno Wasiiro ah oo Istiqaalo rasmi ah gudbiyay inay iyaguna jiraan.
Wasiiradda ka hor yimid Khayre ee Qaarkoodna is casileen, qaarna hadda jidka ku soo jiraan waa kuwo si toos ah ugu xiran Madaxwayne Farmaajo oo ay Xulufo ahaayeen, sida Maryan Qaasim, C/raxmaan Bayle, Cabdi Faarax Juxaa iyo kuwa kale, Waxaana soo baxaya Tuhuno ku saabsan inay dhici karto in Madaxwaynuhu uu wax ka og yahay Buuqa Siyaasadeed ee hareeyay Xukuumadda Khayre.
Mooshin ka dhan ah Jawaari oo La Filayo in Baarlamaanka ay horgeeyaan Xildhibaano taageersan Khayre.
Dhagayso: Golaha Wasiiradda Oo Maanta la hor geeyay Liiska Horjoogayaal Alshabaab ah oo la qabtay.